Wednesday July 29, 2020 - 06:57:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay ayaa caabuqa Covid19 laga helay xayawaan xilli caabuqan uu boqolaal kun oo ruux caalamka ku dilay malaayiin kalane uu bukaanno taak daran ka dhigay.
Wararka ka imaanaya magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa sheegaya in xayawaanka loo yaqaan bisadda ama mukulaasha laga helay kiiskii ugu horeeyay ee Carona Virus ah.
waaxda caafimaadka uqaabilsan dowladda Ingiriiska ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in bisad guri joog ah uu haleelay caabuqa covid19 kadib markii iyadoo xanuunsan baaritaan caafimaad lagu sameeyay.
haweenay lagu magacaabo Kiristiyaana Midlemis oo ah Madaxa xannaanada xoolaha ee dalka ingiriiska ayaa sheegtay in arrintan ay tahay mid naadir ah balse maalmo kadib ay bisaddu ka bogsootay xanuunkii hayay oo lacaddeeyay in uu ahaa caabuqa Covid19.
"Ma jirto caddeymo muujinaya in xayawaanku ay xanuunka usii gudbin karaan bani'aadamka. Waxaana sii wadi doona in aan la socono xaaladda bisadda, dadka xayawaanka xanaanaystana waan ku wargelin doonnaa wixii tallaabo ah haddii xaaladdu ay isbadesho" sidaas waxaa tiri madaxa caafimaadka dowladda Ingiriiska.
Xeeldheerayaasha caafimaadka waxay sheegayaan in dabayaaqadii sanaddii 2019 markii uu cudurka Carona kasoo bilaabanayay dalka shiinaha laga qaaday xayawaanka Feedmeerta loo yaqaan arrinkaas oo daliil cad u ah in insaanka iyo xayawaanku cudurrada isqaadsiin karaan.
Dalka Ingiriiska waa wadanka sedaxaad ee halaagga ugu daran uu ka geystay caabuqa Covid19 waxaana ka horreeya oo kaliya wadamada Mareykanka iyo Baraaziil.
Dadka Carona ugu dhintay dalka Hindiya oo 100 kun kor udhaaftay.
Wararkii ugu dambeeyay: Cudurka Carona oo halaag ka geysanaya Mareykanka iyo Baraaziil.